မြားများ: နေ့စဉ်ဘဝ၊ သန့်စင်တဲ့ အတွေးနဲ့…(မြင့်သန်း)
နေ့စဉ်ဘဝ၊ သန့်စင်တဲ့ အတွေးနဲ့…(မြင့်သန်း)
ဆရာတာရဲ့ ချင်းတွင်းအမှတ် ၆၉ ထဲမှာ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ရေးထားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။(ခုနေတော့ ချင်းတွင်းခမျာ အသက်ငင်သလို ဖြစ်သွားရာက သတိပြန်လည်လို့ ဝမ်းသာရပါတယ်။ ဘာသာရေးရော၊ နိုင်ငံရေးရော၊ ဘုရားစာ တရားစာရော ရောမွှေထားတဲ့ စာတစ်ပုဒ်။ ဘာမှန်းတော့ အသေအချာမပြောတတ်ဘူး။ မေတ္တာပို့တာလား၊ ဆရာလုပ်ပြချင်တာလား တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။ အဲဒီမှာ “ဆိုရှယ်လစ်စနစ်က မှီခိုလိုစိတ်ကို ပေါက်ပွားစေပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးက အရာရာကို ကြောက်တတ်သော စိတ်ကို အမြစ်တွယ်စေသည်” လို့ ရေးထားတယ်။ ဘာကို အဆိုအဖြစ်တည်ပြီး ဘယ်လို နိဂုံးဆွဲယူထားမှန်းတော့ မသိဘူး။ ဒီလိုဆိုရတာက အကြောင်းရှိတယ်။ သက်ဝင်ယုံကြည်မှု တစ်စုံတစ်ရာရှိတဲ့ လူတိုင်းမှာ မှီခိုလိုစိတ်ဆိုတာက ရှိနေကြတာချည်းပဲ။ ဘုရားရှိခိုးတယ် ပုတီးစိပ်တယ်ဆိုတာကိုက မှီခိုစိတ်ရှိနေလို့လုပ်တာ။
ဒီတော့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ခေတ် ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှီခိုစိတ်ရှိတဲ့ လူတွေဟာ ရှိနေမှာပဲ။ စနစ်တကျဆင်ခြင်မှုနည်းပါးတယ်၊ ပွင့်လင်းသိတတ်စွမ်း နွမ်းပါးတယ်။ အစဉ်အလာသိမှုအထဲမှာ ချာလည်လည်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ ပိုပြီး မှီခိုစိတ်ရှိကြတယ်။ ဒီလိုခပ်ညံ့ညံ့လူတွေဟာ ခေတ်တိုင်း ကာလတိုင်းမှာ ရှိနေကြမှာပဲ။ ဒါဟာ ခေတ်ကို အပြစ်ဆိုစရာ အကြောင်းတစ်ခု မဟုတ်ဘူး။
တကယ်တော့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရွေ့လျားပြောင်းလဲနေတဲ့ အစဉ်ထဲမှာ လိုအပ်စွာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အနေအထားတစ်ခုပဲ။ မြန်မာသမိုင်းထဲမှာ တစ်နေရာ ရှိနေခဲ့တာကို ဘယ်လိုပဲ မသိကျိုးကျွံပြုပြု ရှိနေခဲ့ခြင်းကို ဖယ်ချန် ပလပ်ထားလို့ မရနိုင်ဘူး။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အားလုံးကို စစ်တပ်က အာဏာမသိမ်းခဲ့ရင် မနေ့တစ်နေ့ကထိ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ ရှိမလာနိုင်၊ ဖြစ်မလာနိုင်ခဲ့လို့ ပေါ်ပေါက်ရပ်တည်နေခြင်းဟာ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ (ဒီအချက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အရပ်သူ အရပ်သားတွေက ကျေးဇူးမတင်တောင် စစ်ဘက်က လူတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကိုတော့ (ရှာကြံပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ကျေးဇူးတင်ကြဖို့ကောင်းတယ်။ လက်သည်မပေါ်ဘဲ မွေးခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တောင် အဖေဆိုတာက ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ။ သမိုင်းရဲ့ ရှိနေခြင်းဟာ ရှိနေခြင်းတစ်ခုပဲ။အဲဒီအရင်ကို ပြန်ကြည့်ဦး မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ ပထမဆယ်နှစ်သာသာဟာ တက်မပါ ပဲ့မပါနဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာရေစုံမျောနေတဲ့ လှေလိုပဲ။ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိဘူး။ ပြည်တော်သာ စီမံကိန်းတို့ လက်နက်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ လဲတာတို့ လူတစ်ယောက် တိုက်တစ်လုံး၊ ကားတစ်စီး။ ငွေငါးရာဆိုတာ တို့တစ်တွေဟာ နောက်ဆုံးတော့ ဦးနုရဲ့ လိုဏ်ဂူကြီးအောက်မှာ ပျောက်သွားတာပဲ။ ပါလီမန်မှာက “အမတ်မင်း ဦးဘယ်သူဟာ အိပ်ငိုက်နေပါတယ်” ဆိုတာလောက်ကပဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောစရာရှိတာမို့ ရေဒီယိုက အသံလွှင့်ရတယ်။ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေမှာ ဘာမှန်းကို နားမလည်နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားမှာ။ လကိုကြည့်ပြီး ထမင်းဆီဆမ်းရွှေလင်ပန်း တောင်းနေကြသလိုမျိုး။ ပြည်သူတွေက ဘိန်းငိုက်နေကြသလိုမျိုး။
ဒီနောက် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗြုန်းဆို ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ထဲဆိုတာထဲ ရောက်သွားတယ်။ တစ်နည်းဆိုရရင် ပြည်သူတွေ လန့်နိုးလာကြရတယ်။ လယ်သမား စပါးစိုက်နေသမျှ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဗိုက်ဝနေမယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်က လန့်နိုးလာကြရတယ်။ ဆန်ထွက်တဲ့ အရပ်မှာ ထမင်းငတ်ကြရတယ်။ လကိုကြည့်ပြီး ထမင်းဆီဆန်း ရွှေလင်ပန်းနဲ့ တောင်းနေလို့တော့ဖြင့် မဖြစ်ချေတော့ဘူးလို့ သိလာကြရတယ်။ တကယ်တော့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဟာ ငိုက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို နှိုးလိုက်တာပဲ။ နှိုးလိုက်ရုံတင်မကဘူးး။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ရောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက်ဆိုတာလောက်နဲ့ မပြီးဘူးဆိုတာ အသိပေးလိုက်တာပဲ။ စနစ်အနေနဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟာ စနစ်ကောင်း။ ဒါပေမဲ့ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ မကျွမ်းကျင်တာ(အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ ကွားခြားမှုကို မမြင်ခဲ့တာ။ မဟုတ်ရင် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ကြတာ။) ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ကွန်မြူနစ်ဝါဒတွေကို ရေရေရာရာ မသိတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းတွေကို အကြံပေးခန့်၊ လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး ယုံကြည်အားကိုးတာနဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ထူထောင်ဖို့အတွက် ဆီလျော်အပ်စပ်မှု အမှန်တရားသဘောမှာ အခြေမခံဘဲ တိုက်ရိုက် ပုံတူကူး(အသွင်ပြောင်း)ဖို့ လုပ်တာတွေမှာ မှားခဲ့ကြတာ။ Industrialization လို့ခေါ်တဲ့ စက်မှုနည်းပညာအခြေခံနိုင်ငံတော် ပြောင်းဖို့ လုပ်ရာမှာ ဆယ်ဗင်းပွိုင့် အိတ်သရီးတို့၊ ဆယ်ဗင်းပွိုင့် အိတ်ဖိုးတို့ဘက် စိတ်သန်သွားတော့ စက်မှုလယ်ယာဟာ ပြောပလောက်အောင် မကြီးထွားခဲ့ရဘူး။ တခြားအမှားတွေလည်း ရှိခဲ့မှာပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက စနစ်အပိုင်း။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်အထိတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့ပြပြည်ရွာထူထောင်ရေးအတွက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ စနစ်တွေအထဲမှာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟာ စနစ်ကောင်းတစ်ခု။ အားကောင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခု။ လိုအပ်တာထက် ပိုသွားတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့ တောပြန်တွေကို လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး အားကိုးရင်း အကြံပေးခန့်လိုက်ရာက “မလုပ်တတ်မကိုင်တတ် စနစ်” ကနေ “မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင်စနစ် အဖြစ် ပြောင်းသွားခဲ့ပြီး လိစ္ဆဝီပြည်ပျက်ကိန်းမျိုးနဲ့ ကြုံရတော့တာပဲ။ နိုင်ငံရေးစနစ်တိုင်းမှာ Flaw ဆိုတာ ရှိတာချည်းပဲ။
နောက်တစ်ချက်က “ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးက အရာရာကို ကြောက်စိတ်ကို အမြစ်တွယ်စေသည်” လို့ဆိုတဲ့အချက်။ ဒီအမြင်ကလည်း တိမ်တယ်ထင်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်မှာဖြစ်ဖြစ် မာကီယာဗယ်လီရဲ့ နိုင်တာဟာ တရားတာပဲ ဆိုတဲ့ အမြင်ဟာရှိနေသေးတာပဲ။ ဒီမိုကရေစီခေါ်ခေါ် ဘာခေါ်ခေါ် ခေါ်ချင်ရာခေါ်၊ နိုင်တဲ့လူ(နဲ့ သူရဲ့ အဖွဲ့အစည်း)က လုပ်ချင်ရာ လုပ်နိုင်တာပဲ။ ကန့်သတ်မှု ထိန်းချုပ်မှုဆိုတာက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာ ရှိနေရမှာပဲ။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ကြောက်တာက ကြောက်တဲ့ လူရဲ့ ကိစ္စ.။ ကြောက်တယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်တုံတရားရဲ့ အပမှာ။ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်တာပဲ။ သွားနှုတ်ရမှာ အကြောက်ဆုံးလူတွေဟာ စစ်သူကြီးတွေပဲဆိုတဲ့ စကားတောင် ရှိတယ်။ ကြောက်တာက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကာလဒေသ ပယောဂမှာတည်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြားက သဟဇာတဖြစ်မှု မဖြစ်မှုနဲ့ ဆိုင်တယ်။ သဟဇာတဖြစ်မှုဟာ ဆင်ခြေမှာ အခြေခံတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာ အခြေမခံဘူး။ ချင်းတွင်းထဲက အဲဒီဆောင်းပါး တစ်နေရာမှာ ။ “ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွပ်လပ်ရေးရပြီး ပထမ ဆယ်နှစ်သာသာဟာ၊….အသက်ဝင်၏။ လွတ်လပ်၏။ ဒုက္ခထင်ရှားရှိသော်လည်း ရှင်သန်ပုံက မြန်မာတို့စရိုက်နဲ့ ကိုက်ညီသည်မို့ ကျောက်တုံက ပွင့်သောပန်းများပင် ရှိခဲ့ဖူး၏ လို့ ရေးထားတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ အသက်ဝင်နေခဲ့မှန်းတော့ မသိဘူး။ (ဆောင်းပါးရေးတဲ့ လူက ဦးနုရဲ့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို တကယ်ပဲ ကြုံခဲ့ဖူးသလား။ လေသံဖမ်းတရားနာတာပဲလား။ အဲဒီခေတ်က ရန်ကုန်မြို့တော်ဆိုတာ ဘယ်နားဆီမှာ ရှိမှန်းတောင် သိရဲ့လားမသိဘူး။ တည့်တည့်ရေးရရင်တော့ ဖြီးရေးနေမှန်းတော့ သိသာတယ်။) ကျောက်တုံးက ပွင့်တဲ့ပန်းဆိုတာဟာ တကယ်တော့ ဘာသာစကားအရ နားထောင်လို့ကောင်းရင် ကောင်းမယ်။ တကယ့်ဘဝနဲ့ ယှဉ်ပြောရတဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အသုံးမတည့်တာမျိုးပဲ။ ကနေ့ခေတ်ကာလမှာ ဘာမျိုးဆက် ညာမျိုးဆက်ဆိုပြီး အခွင့်အရေး ဝင်ယူနေကြတာမျိုးပဲ။ ဘာသာစကားကို အသုံးချပြီး ဝမ်းရေးထူထောင်ခြင်း တစ်မျိုးပဲ။
အဲဒီခေတ်ဟာ တကယ် Static လို့ ခေါ်ရမယ့်အချိန်။ ပြည်တွင်းမှာ သူပုန်သကန်မြူးနိုင်တဲ့ကာလ။ အဲဒါကိုအသက်ဝင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါ့။ ရန်ကုန်မြို့ကထွက်လို့ မှော်ဘီကို ဆင်းလာပြီး ဗုံးခွဲတဲ့ကာလ။ နယ်ဆိုတာကို မပြောနဲ့ဦး။ ရန်ကုန်မြို့မှာ သူခိုးကြမ်းပိုး အစုံရှိတယ်။ နေဝင်ဖြိုးဖျမှာ ရန်ကုန်မြို့ကနေ ထွက်လာလို့ ကန်ဘဲ့လမ်းဆုံလောက်ရောက်ရင် အလုခံရနိုင်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်က ဝန်မင်းများက တိုင်းသူ ပြည်သားကိစ္စ လှည့်မကြည့်နိုင်သေးဘူး။ သူတို့အချင်းချင်း ရာဇပလ္လင် ဖင်မြဲဖို့တိုက်နေရတယ်။ ဒီကြားထဲ နိုင်ငံရေးအရမွေးပြီး မြှောက်စားထားတဲ့ ရဟန်းပျိုတို့ သံဃာပါတီ ဗမာပြည်တို့ ဆိုတာတွေက လုပ်ချင်ရာလုပ်တာ။ သူတို့က တစ်မှောင့်။ ထေရဝါဒဆိုတာနဲ့ မဆိုင်သလေ ငံပြာရည်ပဲ။ ကိုလိုနီစနစ်ရဲ့ လက်ကျန်အပြုအမူတွေ ဆက်လက် ရှင်သန်နေသေးတယ်။ ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ ယတိပြတ်မလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မလုပ်ဆောင်ရဲတဲ့ကာလ။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတိုင်းမှာ လူမုန်းမခံရဲလို့ ရဲရဲချည်း မလုပ်ရဲတဲ့ အလေ့ရှိတယ်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်းမှာ အာဏာရသူတိုင်းဟာ မြို့မေတ္တာခံယူမယ် သားပါခင်ဗျာ့ဆိုတဲ့ ခံယူမှုမျိုးရှိနေခဲ့ကြတယ်။ ဆက်ပြီး တင်ကူးအားထုတ်ချက်ပါ။ အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီစနစ်တိုင်းမှာ လိုတာက အပြောလှ အပြကောင်း ဆိုတာပဲ။ အပြောလှ အပြကောင်းဆိုတာဟာ မျက်လှည့်ဆရာတွေဆီက လာတာပဲ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးကို လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ လုပ်တာ Politics as profession မှာ ဒါပဲလိုတာ။ ဒါက ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်တိုင်းမှာ တွေ့ရတဲ့ ညံ့ဖျင်းမှု။ ဒီတော့ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပထမ ဆယ်နှစ်သာသာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ဥပမာစကားဟာ စုန်ရေနဲ့ မျောသွားတဲ့ နွားချေးခြောက်လိုပဲ။ ဘာမှ အရာမရောက်ဘူး။ ကမ်းတင်ကာမှ မြေသြဇာဖြစ်မှာ.။
တကယ်တော့ လူတွေဟာ အားကိုရှာရင်းက ကိုးကွယ်အားထားမှုပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အဲဒီကနေ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု။ နောက်တော့ ဘာသာရေးရယ်လို့ ဖြစ်လာသတဲ့.။ ဒီကနေ့ကာလမှာတော့ ဘာသာရေးဆိုတာ လေ့လာစရာ အကြောင်းတစ်ရပ်။ ဆက်လက်နှီးနှောသင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု။ နေ့စဉ်ဘဝ ဆက်လက်ရှင်သန်နေရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလို့ရတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပဲ။ စနစ်တကျတွေးခေါ်နိုင်တာရဲ့ လမ်းဆုံးတစ်နေရာက ယုတ္တိနည်းလမ်းတကျဖြစ်မှုမပါတော့ဘဲ စိတ်ဖြေသိမ့်ကြည့်နေစရာ နေရာတစ်ခုပဲ။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံတစ်ခု ရေးပါရစေ။ တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတို့ နှစ်ယောက်သား ရှေးတရုတ်ဘုရားကျောင်းကြီး တစ်ခုထဲမှာထိုင်ပြီး ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာ လာသူသွားသူတွေကို ကြည့်နေကြရင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ဘာသာရေးဆိုတာကို ဘယ်လိုအနက်ပေးင် ကောင်းမလဲလို့ ထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက အတော်ကလေးကြာအောင် ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး။ အဲဒီတုန်းမှာပဲ မိန်းမတစ်သိုက်ဖြတ်သွားကြတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ပြောတယ်။ “အနက်ပေးတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးကွာ။ အနေအထားချင်း ယှဉ်ပြောသလို ပြောရရင်တော့ ရေမွှေးနံ့လိုပေါ့ တဲ့။ သူပြောတာက သိပ်မဆိုးလှဘူးထင်တယ်။
ရေမွှေးဆိုတာက အနံ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ မွှေးတော့ မွှေးတာချည်းပဲ။ မွှေးပုံမတူဘူး။ သုံးတဲ့ လူတွေလည်း မတူကြဘူး။ အကြိုက်မတူလို့ သုံးတဲ့လူ မတူတာပဲ။ ဈေးကြီးတိုင်းလည်း လူတိုင်းမကြိုက်ဘူး။ တချို့ကတော့ ရေမွှေးအနံ့ရတာနဲ့ ချေတော့တာပဲ။. မခံနိုင်ဘူး။ ဒီတော့လည်း ယှဉ်ပြောတဲ့ အနေအထားအရတော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲ။ ဒိပြင် ပိုပြီး သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ လူတိုင်းဟာ ရေမွှေးမသုံးကြဘူး။ ရေမွှေးဟာ သုံးချင်တဲ့လူတွေ သုံးဖို့ သက်သက်ပဲ။ ဘာသာရေးလည်း ဒီသဘောပဲ။ သုံးချင်တဲ့လူတွေ သုံးဖို့ပဲ။ ရေမွှေးလိုပဲ၊ ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီမတူဘူး။ အနံ့မတူဘူး။ သုံးတဲ့လူက သူ့သဘော ဘဝင်ကျလို့ သုံးတာ။ “ငါ၏….” ဆိုတဲ့ အကျိုးစီးပွားကို တွက်ဆမကြည့်ဘဲ ဘယ်သူမျှ ရေမွှေးမဆွတ်သလို ဘယ်သူကမှလည်း ဘာသာရေးတစ်ခုကို လက်ခံထားမှာမဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံး.. “ ငါ” ဒုက္ခမရောက်အောင်၊ ငါ အန္တရာယ်မများအောင်၊ ငါ စိတ်ချမ်းသာရအောင်” ဆိုတဲ့ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သိစိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် တိမ်မြှုပ်နေတဲ့ အသိစိတ်တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အခြေခံပြီး လက်ခံထားကြတာပဲ။ ဘာသာရေးရဲ့ ရှိနေခြင်းကြောင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ဆင်ခြင်နည်းလမ်းတကျမဟုတ်ပေတဲ့ သီးခြား လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သာယာမှုတစ်ခုခုတော့ ပေးနိုင်တယ်။ တကယ်တော့ ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံဘာသာရေးနဲ့ ဘာသာရေးအခြေခံ ယဉ်ကျေးမှုက ကွဲသေးတာကိုး။ခုခေတ်မှာက နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပုံစံမှာ အခြေတည်ထားတဲ့ ဘာသာရေးကို လုပ်နေကြတာ။ လွယ်လွယ်နမူနာပြောရရင် မော်ဒယ်ကလေး မင်းသမီးကလေးတွေ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး အနံ့ကလေးထွက်လာရင် ဘာသာရေးစကားတွေ အများကြီးပြောလာကြတာမျိုး။ သီလရှင်ဝတ်ပြ၊ လူရိုသေရှင်ရိုသေ ပြန်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ရတာမျိုး။ လူရေးလူရာဝင်အောင် လူကြီးသူမနဲ့ သိရအောင်ဈ ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းထဲပါအောင်…စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပိုက်ဆံတကယ်တမ်းမလိုလှတဲ့ နေရာမှာ ထပ်တလဲလဲ သွားလှူနေကြတာမျိုး။ ဒါတွေက နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပုံစံအရ လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ဘာသာရေး အခြေခံအပြုအမူတွေပဲ။
မိရိုးဖလာလက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးကျတော့ တစ်မျိုး။ ဆင်ခြင်တုံတရားမပါတဲ့ သိမှုတစ်မျိုးလိုပဲ။ ဆာဂျင်မေဂျာကြီးက တန်းစီ၊ ညာညှိ၊ သတိဆိုတာနဲ့ ဘာမှပြန်မမေးတော့ဘဲ လိုက်လုပ်ကြရတာမျိုး။ ဘာမှအနှစ်မရှိဘူး။ လက်ခံထားတဲ့ အသိတစ်ခုသဘောနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် လူကြားထဲ အီးပေါက်တာ ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သိမှုသဘောပဲ ဘာမှမပိုဘူး။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက် လူမျိုးတစ်မျိုး၊ မြို့ပြပြည်ရွာတစ်ခုရဲ့ တိုးတက်ရေးမှာ ဘာသာရေးဟာ ရှိနှင့်နေတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာပဲ။ ရှိနှင့်နေတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာတိုင်းမှာ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ တိုင်းထွာဆုံးဖြတ်လို့ မရနိုင်တာတွေ အပုံချည်းပဲ။ ဥပမာ-က အရပ်ဒေသမှာနေတဲ့ ငဖြူဟာ သူ့မိဘက -ခ-ဘာသာရေးအမြင်ကို လက်ခံတဲ့အတွက် သူကလည်း -ခ- ဘာသာရေးအမြင်ကိုပဲ လက်ခံတယ်။ ဆိုတာက ဖြစ်-ပျက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းက ရွေ့လျားပြောင်းလဲမှု တစ်ခုပဲ။ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့မဆိုင်ဘူး။ တစ်ဖက်ကနေ ပြန်ပြောရင်တော့ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အသုံးချခဲ့ရင် ငဖြူဟာ သူ့မိဘလက်ခံထားတဲ့အတိုင်း လက်ခံချင်မှလက်ခံမယ်။ လက်ခံတယ် လက်မခံဘူးဆိုတာ လူရဲ့ သီးခြားသိမှု၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး၊ သိမှတ်ခံစားနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာတွေနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်။ ဒီပြင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အခြေခံတဲ့ သူရဲ့ သိမှု၊ သိနိုင်မှုဘောင်အတွင်းက လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေတာပဲ။ မွေးရာပါအခွင့်အရေးပဲ။ ဘောလုံးပွဲကို ကြိုက်တဲ့လူရှိပေတဲ့ ဘောလုံးပွဲ မကြိုက်တဲ့လူကို မကြိုက်ရတန်ကောရယ်လို့ အပြစ်တင်နေလို့ မရဘူး။ တင်နေစရာလည်း မလိုဘူး။ တင်လည်း အလကားပဲ နေမယ်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအခြေခံတဲ့ ဘာသာရေးတွေမှာတော့ လူတွေဟာ အားကိုးတယ် သက်ဝင်ယုံကြည်တာရယ်ကို အခြေခံကြတယ်။ အကျင့်မှာအခြေခံတဲ့ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်မျိုးမှာတော့ အကျင့် ဟာ အခရာပဲ။ ဆုတောင်းနေလို့ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇျယ်နေလို့တော့ လွတ်မြောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေတဲ့ အကျင့်ပိုင်းက လျော့ပါးလာကြလေတော့ အကျင့်မှာ တည်ထားတဲ့ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေဟာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအသွင်ကိုပဲ ဆောင်လာကြတော့တယ်။ဒီတော့လည်း ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေဟာ အခြေခံရှုမြင်ပုံချင်း မတူကြတာမှန်ပေတဲ့ ဒီဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေကို လက်ခံကျင့်သုံးလာကြတဲ့ လူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ တစ်မျိုးတည်းလို ဖြစ်လာတော့ ကွဲပြားဖို့ ချဲကြစို့ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက် နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ အာဃာတပွားများဖို့ မလိုအပ်တဲ့ သိမှတ်ချက်တစ်ခု ပေါ်သွားတော့တာပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကျေနပ်မှုကို အရင်းတည်ပြီး လုပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာ တစ်ခြားလူရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်နေတာကို သွားပြီး ခလုတ်မတိုက်သင့်ဘူး။ လွတ်မြောက်မှုကို အလေးပေးတဲ့ ဘာသာရေးအမြင်ကို ကယ်တင်ခြင်းခံရချင်လို့ ဆုတောင်းတာနဲ့ ရောထွေးပစ်လို့ မရနိုင်ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဘာသာရေးအရ လွတ်လပ်မှု ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခု။ အမည်းကွက်တစ်ခု စွန်းခဲ့ရတာက လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပေါ်လာတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ဆိုတာအထဲမှာ။ ဘာသာရေးအမြင်ကျဉ်းတဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒီ ဦးနုအာဏာရလာစဉ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ တကယ်တော့ အဲဒီအမြင်ဟာ ဘာသာရေးတဖက်စောင်းနင်းကျမှု အမြင်တစ်ရပ်မှာ အခြေခံတာပဲ။ နိုင်ငံရေးအရတော့ ဘာသာရေးကို အသုံးချလိုက်တာပဲ။ ဘာသာရေးအရ လူတွေကို ထိန်းချုပ်လိုက်ဖို့ကြိုးတဲ့ အမြင်သက်သက်ပဲ။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ရောက်ကာမှ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်းက ပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်းရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုတစ်ရပ်ပါ။ နိုင်ငံရေးအားထုတ်မှုတိုင်းမှာ ဘာသာရေးအရ၊ နှောင့်နှေးရတာ တုံ့ဆိုင်းရတာတွေရှိတယ်။ ဘာသာရေးအရထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာက လူလူချင်းကို ဘာသာရေးအခြေခံတန်ဖိုးဖြတ်လိုက်တာမျိုး။ ဦးနုရဲ့နိုင်ငံတော်ဘာသာ စီမံကိန်းဟာ လူလူချင်းခွဲခြားဖို့ အားထုတ်တဲ့စနစ်ပဲ။ အထုးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တောင်ပေါ်သူ တောင်ပေါ်သားတွေ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသက လူတွေကို ဘာသာရေးအခြေခံနဲ့ ကန့်သတ်ပစ်ပြီး တစ်ဆင့်နိမ့်လူအမျိုးအစားတစ်ရပ် လုပ်ပစ်တာပဲ။ အဲဒီစနစ်မျိုးပဲ ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုချင်ဆို နောက်ပိုင်းမှာ ထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို နိုင်ငံရေးအရ မြှောက်စားပြီး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းတဲ့ ဆရာတကာ စီမံကိန်း။ ဘယ်အရပ်ဒေသမှာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ခေတ်ကာလမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးအပိုင်းက ကြည့်ရင် ဘာသာရေးဆိုတာ သုံးနိုင်ရင် သုံး၊ မသုံးနိုင်ရင် အဟောသိကံ use it or loose it လို့ ဆိုကြတာကိုး။
ဆရာတကာစီမံကိန်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အကျိုးက (ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော် မဆုံးဖြတ်ဘူး) “ငါ” “ငါရဲ့……” ဘာသာရေးအမြင်ပေါ်လာတာပဲ။. “ငါ” ဘာသာရေးအယူဟာ သူများထက် သာတယ် ကောင်းတယ်လို့ ဖြစ်လာတာပဲ။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ ထေရဝါဒဘက်ကို ပြန်ပြီးဦးလှည့်လာခဲ့ရာက အဲဒီနောက် စစ်ခေတ်တွေအထဲမှာ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချလာဖို့အတွက် လွှတ်ထားလိုက်တယ်။ ဒီမှာတင် ပေါ်ပင်ကိုယ်တော်ကလေးတွေ အများကြီးပေါ်လာတယ်။ တခြားလူတွေရဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို ထိပါးလာတယ်။ အတင်း “တွန်းပို့”ဘာသာရေးအမြင်တွေ ဖော်ထုတ်လာကြတယ်။(ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့ လက်ကျန်လှုံ့ဆော်မှုအမြင်ဖြစ်တဲ့) ဘာသာရေးနဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို ရောမွှေပြလာကြတယ်။ ဟိုတုန်းက သံဃာ့ပါတီ ဗမာပြည်က လုပ်သလို ဒေါသအခြေခံ ရမ်းကားမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ စွက်ဖက်လာကြတယ်။ ထေရဝါဒဆီက လမ်းခွဲထွက်လာကြပြန်တယ်။ ဒါတွေက မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်က သူ့ဘာသာအလုပ်ရှုပ်နေတော့ လွှတ်ထားတာတွေ ပါတယ်။။ လူနာမျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေကိုး။ ခုဆို ရဟန်းဝတ်တွေဟာ သာမန်လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေထဲမှာ ပေါ်တင်ကြီးအတင်း တရားဝင်ဟောနေကြတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။. “ငါ” “ငါရဲ့…..” ဆိုတဲ့ ဘာသာရေးအမြင်ကို မသိမသာထည့်နေကြတယ်။ (တကယ်တော့ မသိမသာ သွတ်သွင်းခံနေရတဲ့ အသိတစ်စုံတစ်ရာဟာ သိသိသာသာချည်း သွတ်သွင်းလိုက်တဲ့ အသိထက် ဆိုးတယ်။) စားကြောပွင့်နေတဲ့ကိုယ်တော်ကလေးတွေကလည်း တပည့်လက်သားအစုံအညီနဲ့ စာပေလောကကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးမှာတောင် ဝင်ပြီး မြှောက်သလို နှောက်သလိုလိုတွေ လုပ်နေတာ မြင်နေရ ကြားနေကြရပြီ။ တကယ်တော့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ တခြားလွတ်လပ်ခွင့်တွေလိုပဲ။ လူတိုင်းမှာ ရှိနိုင်တဲ့ ရှိနိုင်ခွင့်တစ်ခုပဲ။ ငါ့စကားနွားရ ပြောဖို့ မဟုတ်ဘူး။ အခြားသော ရှိနေခြင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုပါမှ ရမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုပဲ။ မိမိရဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတာက သူများကို ရန်ပြုစရာ လက်နက်မှ မဟုတ်ဘဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပါဝင်ပတ်သတ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းက ဝင်ပြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးဖို့။ လူတွေကောင်းလာဖို့ဆိုတာကတော့ လူတွေ့ရဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်ဖို့/ နေနိုင်ခြင်းကသာ ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်မှာ။ လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်ဆိုတာကလည်း ရှိဦးမှ။ မှိုင်းမိနေသေးရင် သန့်စင်တဲ့ အတွေးအခေါ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ချင်းတွင်း မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် ၈၂၊ မေ၊ ၂၀၁၄
Labels: မြင့်သန်း၏ စာများ, ဆောင်းပါး